UAnastasia Volochkova uxelele ngengxaki yangempela yendlu yakhe
Iinceba zabantu abadumileyo kufuneka basombulule imisebenzi engeyonto, ngoko ke umkhonzi we-ballerina u-Anastasia Volochkova kufuneka aphume kwiimeko ezinzima. Inyaniso yokuba "umphathikazi uRae" kufuneka ajongane naye wachazwa ngu-actress ethandwa kakhulu.
Enye yeengxaki zokugqibela ezijongene noRaisa kukungabikho kwezitishi kwindlu entsha ye-ballerina. Nangona inyaniso yokuba indlu yezindlu isisityebi kwaye inemisebenzi eminingi kunye neyokuhlobisa, kwakungekho ndawo yokubeka iintyatyambo. Ukuba kwiindawo zokuhlala ezilula zivumelekile ukubeka imfumba kwijelo yeglasi okanye nakwiibhakethi, ke endlwini ka-Anastasia Volochkova ayimkelekanga, kuba uyinto enkulu ye-esthete. Kuhle ukuba ezininzi zezimbali zivele zibhayisiki.
Enyanisweni, kule veki umculi ubuyele ekhaya kunye nezimbali nsuku zonke. Ngokuqhelekileyo bamnika iirase ezimhlophe ezimhlophe. Yaye ininzi yazo zonke izimbali ezamkelayo ekuhambisweni kweeprayimari "iSiliva Galosha" kunye "Nomfazi Obulalayo".
U-Anastasia ngokwakhe uyavuma ukuba ukuze abafazi bafumane iintyatyambo ezintle njengesipho, umntu makenze izimbali ezihle, kwaye enye inokuqala ngezinto ezilula:
"Njengomzekelo olula: Ukuba umthandayo, umhlobo okanye indwendwe ikucela isiqwenga sesonka, unikele esi sinkwa ngesakhiwo esihle. Kwaye unokwenza okungaphezulu !! Ndi kholelwe! I Roses iya kuba seenyaweni zakho! ".
Ngaba uLududlala Putin watshata okwesibini?
Emva kokuxolelana noAndrei Arshavin wanika umfazi wakhe iholide
Odala uVictoria Daineko wayefanelekile ukuba kube yimibimbi
U-Ksenia Sobchak wathintela indoda yakhe ngothando
U-Olga Buzova uhlazisa uSvetlana Loboda
UVladimir Friske wayenomsindo ngeempembelelo ezityhilele ulwazi malunga neemfihlo zeentsapho
U-Evgeny Tsyganov uxele ngentlanganiso yomfazi wakhe esibhedlele
Khetha ukhilimu ococekileyo wesikhumba seoli
Indlela yokusabela ngayo xa ugxeka umamazala ngokukhuliswa komntwana?
Ukuthotyelwa kweeMviwo-2017 kwizikolo zaseprayimari - iingcamango zeengxaki ezingavamile
Iingxaki zentlalo-yengqondo yeentsapho ezinxilisayo
Isaladi kunye ne-herring, imifuno kunye namaapulo
I-yeast fast buns "Larks"
Oogqirha bakaAndrei Gaidulian basolisa i-lymphoma yesibini-degree
Iidloke zesekhishini zaseCottage
Yintoni endimele ndayenza ukuba indoda yam ilungile?
Udaka olunonyango kunye neempahla zalo
Inkomfa yothando emtshatweni
Ummangaliso ovulekileyo: sifunda ukudibanisa inqanaba yomntwana wehlobo elineentsontshi zokudibanisa
Indlela yokwenza inhlama ye-chebureks-ukukhethwa kweendlela zokupheka ezihamba phambili kunye ne-kefir, i-vodka kunye nobhiya
Indlela yokwenza ukuba ulusu lube lukhuni: ii-secretes ezine-up-up!
UJason Statham: umfana onzima